Fantaro ny fomba handravahana ny tranonao amin'ny fomba boho antitra | Bezzia
Susana Garcia | 26/04/2021 20:00 | Decor, Fironana haingo
La afangaro ny style rehefa manaingo Io no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azontsika atao, satria manome antsika fahalalahana bebe kokoa izany raha ny amin'ny fitadiavana sombintsombiny sy aingam-panahy. Marina ihany koa fa ny fomba dia mitambatra indraindray ary sarotra ny mahatakatra ny iray raha tsy misy ny iray hafa. Ohatra, ny fomba fiotazam-boaloboka dia misy eo amin'ny hafa toy ny indostrialy na boho chic. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ny fomba handravahana amin'ny fomba boho taloha.
El ny fomba boho taloha dia mampiasa ny hatsaran-tarehy sy ny fanamorana ny fomba bohemia miaraka amin'ny fikasihana manokana an'ireo sombin-dohataona manana tantara sy toetrany. Raha tsy misy fisalasalana dia iray amin'ireo fampifangaroana izay tiantsika indrindra satria afaka mamorona tontolo iainana manana toetra maro sy fomba tsy manam-paharoa isika.
1 Ny loko eo amin'ny tontolon'ny boho
2 Ilaina ny zava-maniry
3 Ny fikitika ivelany
4 Ny tapa-boaloboka
5 Aza maika hiravaka
Ny loko eo amin'ny tontolon'ny boho
Angamba ny zavatra sarotra indrindra afangaro sy ampidirina amin'ny endrika haingo boho dia ny loko, satria tsy ny fifangaroana ihany. Amin'ny fomban'ny Nordic dia tononkira fototra maro no ampiasaina ary amin'ity lafiny ity dia mora kokoa izy io, fa ao amin'ny tontolon'ny boho dia tadiavina endrika mahazatra kokoa amin'ny tonony izay mafana matetika. Afaka izy ireo afangaro ny lokon'ny tany, mena, volontany, voasary ary na manga na maitso aza. Miankina amin'ny isan'ny loko tiantsika ampiana izany. Satria misy fahalalahana betsaka, afaka mampiasa tonony maro karazana isika ary hiara-paly amin'izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy mandositra ny fihoaram-pefy isika, satria raha be loatra ny loko dia mety ho reraka isika amin'ny farany. Mampiasà tononkira tena fototra toy ny loko fotsy sy beige ary tapaka eo ambonin'izy ireo ny lamba misy pirinty sy loko tsara tarehy.
Ilaina ny zava-maniry
Ny zavamaniry dia fanampiny tsara amin'ny haingon-trano sy ny trano rehetra, fa amin'ny fomba boho taloha dia saika eo foana izy ireo. Azonao atao ny mampiasa vilany isan-karazany, ny sasany miaraka amina fomba fiotazam-boaloboka, toy ny terra cotta, mba afangaro ireo fomba. Zavamaniry lehibe na cacti no mety. Azonao atao koa ny manantona zavamaniry sasany miaraka am-bilany mony, izay lasa lamaody indray ary mety amin'ny fampifangaroana ireo fomba ireo. Azonao atao ny mamorona zoro feno zavamaniry.
Ny fikitika ivelany
Amin'ny boho chic dia manana sentra mahazatra isika nefa koa a taratry ny fomba fiainana bohemia, izay misy ny kolontsaina fitsangatsanganana sy hafakely. Izany no antony matetika isika dia afaka mahita sombin-kolontsaina hafa amin'ity fomba ity. Raha misafidy zavatra antitra koa ianao dia hanana fikasana tonga lafatra. Aza matahotra mampifangaro sy misafidy singa tianao, na dia tsy fironana aza izy ireo, satria izany no fanahin'ity fomba ity.
Misy hevitra maro samy hafa amin'ny fomba fiotazam-boaloboka, fa ambonin'izany rehetra izany dia tadiavina ireo singa tena izy sy antitra, izay mbola tsy naverina namboarina na tsy kopian'ny zavatra taloha fotsiny. Izany dia azonao atao ny mitady amin'ny soritra, satria ao amin'izy ireo ianao dia afaka mahita sanganasa tena mahaliana, miaraka amin'ny tantarany ary miaraka amin'ny toetrany. Ny fisafidianana ireo sanganasa manokana dia mahazatra amin'ny fomba boho, satria tsy te hanana trano mitovy amin'ny an'ny hafa ianao, mifototra amin'ny fironana, fa zavatra miavaka sy tsy mitovy.
Aza maika hiravaka
Ao amin'ny taovolo boho style ny sombin-javatra tsy maintsy ho manokana, ka azo inoana fa tsy ho hitantsika indray mandeha ny zava-drehetra. Zava-dehibe ny maka fotoana hisafidianana sombintsombiny sy antsipiriany, hikarohana zavatra tiantsika hamoronana atmosfera tonga lafatra ao an-tranontsika. Raha vantany vao manana ny fanaka fototra ianao dia afaka mandany fotoana mitady ireo antsipiriany kely, manomboka amin'ny vazy ka hatrany amin'ny fitaratra. Tsy misy maimaika raha ny amin'ny fitadiavana tapa-boaloboka satria ny zavatra tadiavintsika dia tsy miseho foana aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ahoana ny fomba handravahana amin'ny fomba boho taloha
Azo atao ve ny mihazona fifandraisana tsara amin'ny olon-tianao taloha?